'पर्खि बसें २' अपडेट : नायिका पुजा , लेखक सुशील ?
प्रकाशित : आइतबार, पुष २७, २०७६१६:१७
फिल्म । गोपीकृष्ण मुभिजको व्यानरमा निर्मित सुपरहिट फिल्म ‘पर्खि बसें’ को नयाँ सिरिज बन्ने चर्चा भएसंगै यसमा को -को कलाकार रहने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । विक्रम संवत २०६४ को चैत्र अन्तिममा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘पर्खि बसें’ लाई दीपक श्रेष्ठले निर्देशन गरेका थिए भने यसको दोस्रो सिरिजलाई ‘लभ डायरिज’ निर्देशक सौभर चौधरीले निर्देशन गर्ने भएका छन् । फिल्ममा कथा पनि उनकै रहनेछ । सांगीतिक प्रेम कथामा आधारित फिल्मलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए भने यसै फिल्म मार्फत राजबल्लभ कोइरालाले डेब्यु गरेका थिए ।
यतिबेला यसको सिक्वेललाई राज र उनकी को-स्टार युना उप्रेतीले शुभकामना दिईसकेका छन् । यससंगै पुराना कलाकार नदोहोरिने पक्का भइसकेको छ । गोपीकृष्ण मुभिजले हिमालयन मुभी स्टुडियोसंगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने ‘पर्खि बसें २’ मा अभिनेत्रीको रुपमा पुजा शर्मा हुने सम्भावना रहेको छ । फिल्मको पात्र अनुसार पुजासंग क्यारेक्टरको बारेमा छलफल गरिएको निर्देशक सौरभले बताए । ‘हामीले फिल्मलाई सबै हिसाबले बलियो बनाउन चाहन्छौ त्यसैल पुजासंग पात्रको विषयमा छलफल भएको छ’ उनले भने । नायिका पूजले पनि अफर आफूलाई आएको स्विकार गरिन् । यसैगरी फिल्मको स्क्रिप्टलाई सुशील पौडेलले तयार गर्नेछन् ।
रंग पत्रकार पौडेलले गत वर्षको सफल फिल्म ‘प्रसाद’ बाट लेखन सुरुवात गरेका हुन् । ‘प्रसाद’ पछि उनले केहि समयको विश्रामसंगै दोस्रो फिल्म ‘पर्खि बसें २’ गर्ने तयारी थालेका छन् । पहिलो सिरिज झैँ दोस्रोमा पनि सांगीतिक प्रेम कथा देखाइने निर्देशक सौरभले बताए । फिल्ममा निकिता र बिनोद निर्माता रहनेछन् भने प्रदीप दाहाल र तिर्थ प्रसाद पौडेल सह निर्माताको रुपमा रहनेछन् । फिल्मलाई अल नेपाल वितरणको जिम्मा करण श्रेष्ठ अर्थात रीच इन्टरटेनमेन्टले पाएको छ । गोपीकृष्ण मुभिजले निर्माण गर्ने भनिएको ‘माइकल अधिकारी’ आउँदो माघबाट फ्लोरमा जादैछ । त्यसपछि यो टिमको ‘पर्खि बसें २’ फ्लोरमा जाने सेड्युल रहेको छ । यसको रिलिज २०७७ सालमा हुनेछ । ‘पर्खि बसें’ रिलिज भएको १३ वर्षपछि यसको दोस्रो रिलिज दर्शक माँझ आउँन लागेको हो ।
कबड्डी ३ : प्रदीपसँगै कर्मा पनि ?
‘कबड्डी ४ मा सच्चिन्छौं’
बलेकी ‘निरमाया’ बनिन् कविता (भिडियो)
‘साईनोले नेपालीपन महसुस गरायो’
‘च च हुई पूर्ण मनोरञ्जक छ’
‘कर्ली कपाल’ मा अनमोलसँगै भुवन र नीरुता (भिडियो)